केपी ओलीले वैशाखमा चुनाव नगराउने-पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई। | Pabitra TV
माघ २४ धनकुटा ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाखमा चुनाव नगराउने कुरा पूर्व-प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बताउनु भयो ।
धनकुटा सदरमुकाममा आज आयोजित बृहत विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
संसारका कुनै पनि तानाशाहले आफूले जित्ने सुनिश्चित नभएसम्म चुनाव नगराउने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले ठोकुवा गर्नुभयो । केपी ओलीका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता खतरामा पर्दै गएको पूर्व-प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले बताउनु भयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो:-ओलीले आफू शक्तिशाली बन्नका लागि राज्यका सबै अंगहरू कब्जा गर्न थालेका छन् । त्यसको सशक्त विरोध गर्न आवश्यक छ ।पुर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराईले केपी ओलीको असम्वैधानिक कदमविरुद्धमा विपक्षीदलका सवै एक भएर आन्दोलन गरेमा एक हप्तामा नै केपी ओलीको सरकारले घुडा टेक्ने बताउनु भयो । केपी ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको हौवा सकिएको भन्दै डा. भट्टराईले भारत तिर इङ्गित गर्दै प्रभुकोमा गएर लम्पसार परेको र त्यहाँवाट तथास्तु भनिदिएपछि अहिलेको यो दुष्कर्ममा उत्रिएको वताउनुभयो । ओलीको हाँस्यस्पद उखानटुक्काले मुलुक चल्न नसक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी वलिले संघीयता ध्वस्त पार्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै ‘कु’ गर्न खोजेको यादवले आरोप लगाउनु भएको हो । केपी ओलीको कुनै पहिचान नभएको चर्चा गर्दै हाल सर्वोच्च अदालतमा वहसमा रहेको संसद पूर्नस्थापनाको मुद्धामा सर्वोच्च अदालत नै जानुन तर संसद पूर्नस्थापना भएन भने सवैभन्दा ठूलो जनताको अदालतले नै संसद पूर्नस्थापना गर्ने अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।केपी ओलीको कदम संघियता र धर्मनिरपेक्षता र परिवर्तनको उपलव्धीहरुलाई मास्दै संविधान नै मास्न लागिपरेको आरोप समेत अध्यक्ष यादवले लगाउनुभयो । यसैगरि सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री रकम चेम्जोङ्गले केपी ओलीको कदम असम्वैधानिक भएको चर्चा गर्दै प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने कदम धर्मनिरपेक्षताको अपमान र अग्रगमनलाई रोक्ने काम भएको वताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष वलवहादुर राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न विरोध सभामा सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पर्शुराम वस्नेत, प्रदेश सभासद रामचन्द्र तुम्वा लगायतकाले वोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरि जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नेलाई डा.भटराई र उपेन्द्र यादव लगायतले टिका लागएर स्वागत गर्नुभएको थियो ।
Tags: काम चलाउ सरकार, चुनाब, निर्वाचन आयोग, नेकपा, प्रधानमन्त्री केपि ओलि, बाबुराम भट्टराई, समाजबादी पार्टी
हिले क्याम्पस प्रदेश १ को उच्चस्तरीय शैक्षिक केन्द्र हुने।